करोडौं ठगी गर्ने गुरुङ प्रहरी फन्दामा, हेर्नुहोस २ सय नेपालीलाई ठग्ने दलालको अनुहार ? — Motivatenews.Com
करोडौं ठगी गर्ने गुरुङ प्रहरी फन्दामा, हेर्नुहोस २ सय नेपालीलाई ठग्ने दलालको अनुहार ?
काठमाडौं – थाइल्याण्डमा बसेर करीब २०० जना नेपालीलाई ठग्ने भोजपुरका परशुराम गुरुङलाई प्रहरीले फक्राउ गरेको ।
थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावास लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरुको सहयोग र समन्वयमा थाई प्रहरीले उनलाई २०७५ चैत १३ गते पक्राउ गरेर नेपाल पठाएको थियो । गुरुङलाई आवश्यक प्रक्रिया पश्चात शुक्रबार नेपाल ल्याएर केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले शनिबार सार्वजनिक गरेको हो ।
पीडितहरूलाई चरम शोषण पश्चात थाई प्रहरीलाई उजुरी गर्न समेत नदिई गुरुङले क्यानडाको फ्लाइट हुन्छ भन्दै नेपाल जाने नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइटमा चेक इन गराई सम्पर्क बिहीन हुने गरेको पाइएको छ ।
त्यसका लागि नक्कली भिसा समेत बनाएर ५ लाख देखि २० लाखसम्म असुल्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी अनुसन्धानबाट उनले करीब १३ करोड ठगी गरेको खुलेको छ ।